Ifektri yesikhumba seMicrofiber, abahlinzeki - China Abakhiqizi besikhumba baseMicrofiber
Inokumelana nomhuzuko, ukumelana okubandayo, ukuphefumula, ukumelana nokuguga, nokuthungwa okuthambile. , Ukuvikelwa kwemvelo nokubukeka okuhle, kuyisinqumo esingcono kakhulu sokufaka isikhumba semvelo (isikhumba sokuqala senkomo), manje amabhizinisi amaningi azothengisa isikhumba se-microfiber njengesikhumba sokuqala senkomo ngamanani aphezulu.
Mpunga we-Microfiber Isikhumba Ukuqina Kwesikhumba Sesikhumba Upholstery
Igama eligcwele lesikhumba se-microfiber "yisikhumba esiqinisiwe se-microfiber". Ngeyesikhumba esisha sokunamathisela esenziwe ngesikhumba sokwenziwa. Ngeyohlobo olusha lwesikhumba. Inokumelana nomhuzuko, ukumelana okubandayo, ukuphefumula, ukumelana nokuguga, nokuthungwa okuthambile. Ukuvikelwa kwemvelo nokubukeka okuhle, kuyisinqumo esingcono kakhulu sokufaka isikhumba semvelo (isikhumba sokuqala senkomo), manje amabhizinisi amaningi azothengisa isikhumba se-microfiber njengesikhumba sokuqala senkomo ngamanani aphezulu.
I-Premium Car Beige Microfiber Ezizwa Njengesikhumba
Isikhumba seMicrofiber PU, sisebenzisa inayiloni phansi kanye ne-polyurethane kusendlalelo esiphezulu, yisikhumba sokufakelwa esisezingeni eliphakeme, sinikeza izinhlobo ezingaphezu kwemashumi amabili zemibala kumakhasimende azowakhetha.
Isikhumba Semoto Esisha se-Abrasion New Napa Microfiber Vegan sesihlalo semoto
Isikhumba semoto microfiber siphakeme kunesikhumba semvelo ngokuya ngokufana, amandla wezinyembezi, ukukhanya kombala nokusetshenziswa kwendawo, okube yinkomba yokuthuthuka yesikhumba sokwenziwa sanamuhla ngokusebenza kwaso okuhle kakhulu, ukuvikelwa kwemvelo, izinga lokusebenzisa eliphakeme.
Ikhwalithi ephezulu ye-Auto Microfiber enentengo yokuncintisana
Isikhumba seBensen's microfiber sinokumelana okuphezulu kwemihuzuko, induduzo namandla okuqina. Njengoba iBentham inefektri yayo, iyakwazi ukunikela ngamanani wokuncintisana kakhulu nemikhiqizo esezingeni eliphakeme. Ngemininingwane engaphezulu ngemikhiqizo yethu, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
I-Abrasion Resistant Toughest efakwe iMicrofiber PU Isikhumba
Isikhumba sokwenziwa kweMicrofiber sinezinto ezahlukahlukene zokushuba nokusanhlamvu, okungahlangabezana nomhlobiso wezindawo ezahlukahlukene ngaphakathi emotweni, nesikhumba se-microfiber PU sihlangabezana nezidingo zempilo eluhlaza.
Isikhumba se-Faux Microfiber PU Esiqinile Sekhava Yesitulo Semoto
Isikhumba se-Automotive Microfiber se-Eco-friendly sezinto zemoto
Isikhumba seBensen's microfiber sinokumelana okuphezulu kwemihuzuko, induduzo namandla okuqina. Njengoba iBensen inefektri yayo, iyakwazi ukunikela ngamanani wokuncintisana kakhulu nemikhiqizo esezingeni eliphakeme. Ngemininingwane engaphezulu ngemikhiqizo yethu, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Isikhumba sekhwalithi ephezulu ye-Green Microfiber Yemoto
Ikhwalithi ephezulu yesikhumba se-microfiber inokukhathazeka ukumelana nokugqoka, ukuphefumula, ukumelana nokuguga, ukuthamba nokunethezeka, nokuguquguquka okuqinile.
Ukuqina Okuphezulu Kwesikhumba se-Microfiber Esiphezulu Sezimoto
Isikhumba seMicrofiber sinezinzuzo zokumelana namakhaza, ukugqoka ukumelana, ukuphefumula, ukumelana nokuguga, ukuthungwa okuthambile, ukuvikelwa kwemvelo nokubukeka okuhle.
Isikhumba Esibomvu Sama-anti-bacterial Red Microfiber Sangaphakathi Kwezimoto
Isikhumba seMicrofiber sikhululekile, sihle, sifudumele futhi siyaphefumula. Ine-draping degree ne-plump degree enhle, futhi ibuye ibe nokuthuthuka okusobala kuzakhiwo ze-hydrophobic kanye ne-antifouling.